Garoomada ciyaaraha aduunka Qadar oo daruuro loo sameynayo – SBC
Garoomada ciyaaraha aduunka Qadar oo daruuro loo sameynayo
Iyadoo bishii December ee sanadkii hore wadanka Qadar ee ku yaal mandiqada bariga dhexe uu ku guuleystey martigalinta ciyaaraha koobka aduunka ee 2022 ayaa waxaa hadana taasi barbar socda walaaca laga qabo heer kulka saa’idka ah ee xiliga ciyaaraha ee xagaaga ka jira wadanka Qadar ee badi dalalka gobolkaasi.
Koox saynisyahano ah oo ka tirsan jaamacada magaalada Doxa ee caasimada Qadar ayaa shaaca ka qaaday inay alifeen oo ay ka gaareen horumar sameynta daruuro gacan ku sameys oo qiyaali ah oo ay ugu tala galeen inay dul hogtaan garoomada ciyaaraha isla markaana ay hoos u dhigaan heer kulka xiliga ay socdaan ciyaaraha kubada cagta ee koobka aduunka.
Saynisyahanada ayaa soo saarey horudhaca qorshaha daruuraha gacan ku sameyska ah iyadoo daruurahaasi ay ku shaqeynayaan aalado casri ah oo ku hawlgala tamarta qoraxda waxaana ay la soconayaan dhaqaaqa ama socodka qoraxd waxaana ay ka xigsan doonaan dhulka ama garoomada lagu ciyaarayo si aanay u dareemin kul ciyaartoyda iyo taageerayaasha kooxaha ka qayb galaya ciyaarahaasi.
Naqshada ay u shaqeynayaan daruuraha gacan ku sameyska ah
Talooyinka la soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ah in la badalo xiliga ciyaaraha caadiyan la qabto ee bilaha June & July isla markaana la qabto ciyaaraha bilaha xiliga Jiilaalka ama Winter-ka oo cimilada wadankaasi ay qabowdahay.
Mid ka mid ah naqshada garoomada ay soo bandhigey Qadar
Saud Abdul Ghani oo ah madaxa qaybta farsamada & Injineerinka ee jaamacada ayaa sheegay in daruurahan ay ku shaqeynayaan qalab casri ah isla markaanan si weyn uga hortagi kara heer kulka.
Madaxweynaha xiriirka ciyaaraha kubada cagta ee qaarada Aasiya oo dhalashadiisu tahay wadanka Qatar Mohammed Bin Hammam, oo dhawaan shaaca ka qaaday in uu isu soo taagayo madaxweynenimada doorashada madaxweynaha FIFA ayaa sheegay in wadankiisu uu yahay wadan qalabaysan oo la dagaalami doona heer kulka xiliga ciyaaraha.
Xiligii ay Qadar xusulduubka ugu jirtey ku guuleysiga martigalinta ciyaaraha aduunka ee koobka 2022 waxay soo bandhigtey qorsheyaal ay ka mid ahaayeen in ay dhisayso garoomo ay ku rikaban yihiin qaboojiyeyaal casri oo guud ahaan qabow ka dhigi doona garoomada lagu ciyaarayo iyo waliba goobaha ay ku tababaranayaan ciyaartoyda kooxaha kala duwan.